October 2, 2019 - Myitter
အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်က မြွေပြုတ်ကျပြီးကလေးနို့တိုက်နေသော မိခင်ကိုကိုက်မိ
October 2, 2019 Myitter 0
အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကမြွေပြုတ်ကျပြီး ကလေးနို့တိုက်နေသော မိခင်ကိုကိုက်မိ။ သံတွဲမြို့နယ် မော်ရှည်ကျေးရွာနေ ဒေါ်အညိုသည် နေအိမ်တွင် ကလေးနို့တိုက်နေစဉ် 1-10-2019 1:30အချိန်တွင် ခေါင်မိုးပေါ်မှ မြွေဟောက်တစ်ကောင် ကျလာပြီး လက်ကိုကိုက်မိသွားရာကွင်းဝိုင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံမှ တဆင့် သံတွဲဆေးရုံသို့အရေးပေါ် ဆက်လက်ပို့ဆောင် ကုသနေရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ကံကောင်းပါစေ။ မှီငြမ်း MaMa Zawgyi အိမ်ခေါင္မိုးပေါ်ကေမျြပုတ္က်ပြီး ကေလးနို့တိုက်နေသာ […]
စိတ်​မ​ကောင်းစရာ အဖြစ်​ပါဗျာ……. ကမ်းပါးယံမှာ ကုတ်​ကပ်​သွားလာ​နေတာက ဝါးဥရှာ​နေတာမဟုတ်​ပါဘူး …….. အခုလို ဆင်းရဲဒုက္ခ​ရောက်​ရတဲ့ဘဝက​နေ လွှတ်​​မြောက်​​အောင်​ ပညာတတ်​ကြီးဖြစ်​​အောင်​ အန္တာရာယ်​များလွန်းလှတဲ့ ကမ်​ပါးယံကို ကြိုးစားပမ်းစားသွား​နေရရှာတာပါ….. ဇူလိုင်​လက​နေ ပြင်​လိုက်​ပျက်​လိုက်​နဲ့ အခုထိဆိုး​နေတုန်းပါဘဲ……​ ကျောင်းသား/သူ​လေး​တွေ တကယ်​ကို ခက်​ခက်​ခဲခဲသွား​နေရတာပါ….. ချင်းပြည်​နယ်​ မင်းတပ်​မြို့က ရပ်​ဒုတ်​ရွာဖြစ်​ပါတယ်​….. Unicode စိတြ​မ​ကောငြးစရာ အဖှစြ​ပါဗွာ……. […]
(၇)နှစ်အရွယ်သမီးလေးကို နောက်အိမ်ထောင် ပထွေးက မုဒိန်းကျင့်မူ…😢
(၇)နှစ်အရွယ်သမီးလေးကို နောက်အိမ်ထောင် ပထွေးက မုဒိန်းကျင့်မူ…😢 လူစိတ်မရှိတဲ့ နွားကို အများသိအောင် ရှဲပေးပါအုံး ။မတ္တရာမှာ (၇)နှစ်အရွယ်သမီးလေးကို နောက်အိမ်ထောင် ပထွေးက မုဒိန်းကျင့်တာသမီးလေးကို ” သမီးအဖေအခန့်ထဲမှာစာအုပ်သွားယူပေးပါလား”ဆိုပီ ကလေးမလေးက အခန့်ထဲဝင်သွားတာနဲ့ (၃)ကျိန်တိတိမုဒိန်းကျင့်ခဲ့တာ အခုတော့ ဆေးကုသနေပါတယ်…😭။ မိန်မတွေလဲ ယောက်ျားယူရင် ကြည့်ပီယူကြပါ။ကလေးမလေးသနားပါတယ်။ Source – […]
တရုတ်မယားအဖြစ် လူကုန်ကူးရောင်းစားခံခဲ့ရသည့် မဥမ္မာဦး၏ရင်ဖွင့် စကားသံ လူကုန်ကူးရောင်းစားခံခဲ့ရသည့်မဥမ္မာဦး၏ရင်ဖွင့်စကားသံ
အလုပ်အကြောင်းပြ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး တရုတ်ပြည်တွင် တရုတ်မယားအဖြစ် လူကုန်ကူးခြင်းခံရသူ မဥမ္မာဦး (ခ) မဥမ္မာဝင်းနှင့် သနပ်ပင်မြို့နယ် NLD ရုံး၌ ၃-၁၂-၂၀၁၇ နေ့က တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ မေး-မဥမ္မာကို ဘယ်သူက တရုတ်ပြည်ကို ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နဲ့ ခေါ်သွားပြီး တရုတ်မယားအဖြစ် လူကုန်ကူးရောင်းစားခံရတယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။ သငျ့ရဲ့ဗိုကျအဆီလြှော့ခရြနျလိုပါသလား? 1 ပတျသညျဤသညျဖျောမွူလာကွိုးစာ […]
(၁၃) နှစ်အရွယ် ရှစ်တန်းကျောင်းသူကို ခိုးယူထွက်ပြေးသည့် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်
(၁၃) နှစ်အရွယ် ရှစ်တန်းကျောင်းသူကို ခိုးယူထွက်ပြေးသည့် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အား အမှုဖွင့်… ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်မြို့နယ် ပေါင်းတလည်မြို့တွင် အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် ၈ တန်းကျောင်းသူကို ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် တပါးမှ ခိုးယူထွက်ပြေးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မိခင်ဖြစ်သူမှ အမှု ဖွင့်ထားကြောင်း ပေါင်းတလည် နယ်မြေရဲခစန်းမှ သိရှိရသည်။ တိုင်ကြားခံရသည့် […]
စိန်၊ရွှေ၊ငွေ၊ အိမ် ၊တိုက်၊ခြံ၊ကား အဆင်ပြေပြေ ၀င်လာစေမည့် ဂါထာတော်
စိန်၊ရွှေ၊ငွေ၊ အိမ် ၊တိုက်၊ခြံ၊ကား အဆင်ပြေပြေ ၀င်လာစေမည့် ဂါထာတော် ၂၇ ခေါက်သာ ရွတ်ဖတ်ပါ ဘဝတွင် စိန်ရွှေငွေ၊ အိမ်တိုက်ခြံကား မလိုချင်မှအဆုံး ပေါများချမ်းသာလာပါလိမ့်မယ် မနက်အာရုံတက်တိုင်း၂၇ခေါက်တိတိရွတ်ဖတ်ပေးပါကမိမိဘဝတွင်စိန်၊ရွှေ၊ငွေ၊ကျောက်သံပတ္တမြား၊အိမ်တိုက်ခြံကားမလိုချင်မှအဆုံးပေါများချမ်းသာလာစေ၏ တောစောင့်နတ်၊တောင်စောင့်နတ်၊ရုက္ခစိုး၊ဘုမ္မစိုး၊အာကာသစိုး၊လူမိန်းမ၊လူယောက်ကျား၊တိရစ္ဆာန်များ၊စုန်းကဝေ၊အစိမ်းသရဲ၊နာနာဘာဝများ၊အတွင်း၃၇မင်း၊အပြင်၃၇မင်း၊ဘုတ်၊ဘီလူး၊နတ်စိုးနတ်ဝါးများပါချစ်ခင်လာ၏ ၊တောင်းတိုင်းတတိုင်းရ၏၊သတိပြုရန်မှာ၂၇ခေါက်သာရွတ်ရန်နှင့်မနက်အာရုံတက်ချိနိရွတ်ပါ၊ကာမေသုကံရှောင်ပါ၊အဖြတ်အတောက်မှန်မှန်နှင့်ခက်လေးလေးဘဲရွတ်ပါ၊ အံ့သြရလောက်အောင်တန်ခိုိးကြီးတဲ့ဂါထာတော်ပါ ကျွန်မကတော့ပုတီးစိတ်ပါတယ် မဏိဇောတပတ္တမြားရတနာဂါထာတော် ၁။ ဒိဝါတပတိ အာဒိစ္စော ရတ္တိမာ ဘာတိ […]
တောင်ကြီးမြို့က ထူးထူးခြားခြား ဖိုးသက်ရှည်၊ ဖွားသက်ရှည် မောင်နှမ တစု
တောင်ကြီးမြို့က ထူးထူးခြားခြား ဖိုးသက်ရှည်၊ ဖွားသက်ရှည် မောင်နှမ တစု အကြီးဆုံးက အသက် (၁၀၂)နှစ်ရှိပြီး အငယ်ဆုံးက (၈၃) နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဖွားသက်ရှည်နှင့် ဖိုးသက်ရှည် မောင်နှမ (၇) ဦး ဖွားသက်ရှည်နှင့် ဖိုးသက်ရှည် မောင်နှမ (၇) ဦး ယနေ့ခေတ်မှာ သက်တမ်းစေ့ (သို့) […]
ဒီနေ့မနက် ရုံးသွားဖို့ ၃၃ ကျောက်တန်းကားကို သင်္ဘောကျင်း မှတ်တိုင်ကနေစီးတော့ ၀ါဆိုမှတ်တိုင်အရောက်မှာ ယောင်္ကျားသုံးယောက်တက်လာတယ်….
ဒီနေ့မနက် ရုံးသွားဖို့ ၃၃ ကျောက်တန်းကားကို သင်္ဘောကျင်း မှတ်တိုင်ကနေစီးတော့ ၀ါဆိုမှတ်တိုင်အရောက်မှာ ယောင်္ကျားသုံးယောက်တက်လာတယ်…. သူတို့ကို သတိထားမိတယ်ဆိုတာက ကားထွက်ပြီး မှတ်တိုင်အကျော်မှ နောက်က အသဲသန်တားပြီး တက်လာတာ ကားကျပ်မှန်းသိနေတော့သူတို့အတွက် ဂွင်ပဲလေ… နောက်တော့ ကားက အသေကျပ်တော့ ကားလက်တန်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်တဲ့ အချိန် သူတို့က […]
(၈) ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းကံထူးရှင်။မရှိတဲ့သူတွေပေါက်လို့ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်
(၈) ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ရခိုင်ပြည် ပေါက်တောမြို့နယ် အုန်းနံချောင်းမှဦးကျော်သိန်းဇနီးဒေါ်မနဖြူ သား မောင်မောင်ချေဖြစ်ပါတယ်။(၈) ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ရခိုင်ပြည် ပေါက်တောမြို့နယ် အုန်းနံချောင်းမှဦးကျော်သိန်းဇနီးဒေါ်မနဖြူ သား မောင်မောင်ချေဖြစ်ပါတယ်။မရှိတဲ့သူတွေပေါက်လို့ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ် 😍 (၈) ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ရခိုင်ပြည် ပေါက်တောမြို့နယ် အုန်းနံချောင်းမှဦးကျော်သိန်းဇနီးဒေါ်မနဖြူ သား မောင်မောင်ချေဖြစ်ပါတယ်။ […]
သတင်းကောင်း မှ ကြားချင်သူ တို့အတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သတင်းကောင်းများ စုစည်းတင်ပြမူ
နိုင်ငံကို ကာကွယ်ခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတွေ အိမ်ပြန်ချိန်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရာ မှာ အကျိုးသက်ရောက် တဲ့ ဆေးတစ်မျိုး တရုတ်အစိုးရကြေငြာ ….